Maraykan: Dowlado doonaya in ay saamayn kuyeeshaan doorashooyinka soo socda - Tilmaan Media
Maraykan: Dowlado doonaya in ay saamayn kuyeeshaan doorashooyinka soo socda
Madaxa Xarunta Amniga iyo kahortaga sirdoonka ee Maraykanka “NCSC” William Ivanina ayaa sheegay in dalal ay kamid yihiin Sucuudiga, Kuuriyada Waqooyi, iyo Shiinaha ay ku shaqaynayaan in ay saamayn ku yeeshaan doorashooyinka Maraykanka kadhici doona saddex bilood kadib. Dalalkaan ayaa oga danleh faragalintaan si ay u ilaaliyaan danahooda ay Maraykanka kudhex leeyihiin.
Ivanina ayaa sheegay in todobaatanka maalmood ee soo socda in faragalin abdan dhici doonto. wuxuuna sheegay in ay jiraan dalal doonaya inay saameeyaan doorashada Maraykanka iyagoo kala qaybinaya shacabka Maraykanka, dalalkaas ayaa waxaa kamid ah Kuuba, Sucuudiga iyo Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka ayaa iskudayo lamid ah samaynaya.D
Doorashada madaxtinimo ee Maaykanka aya dhici doonta bisha November ee sanadkaan, waxaana ku tartamaya madaxwaynaha talada haya ee Donuld Trump iyo Joe Beyden.
Xarunta “NCSC” ayaa ilaaliya faragalinta shisheeye ee siayasadda gudaha Maraykanka. Wuxuuna soo bandhigay saddex bilood kahor warbixin looga hadlay khattaraha soo waajihi kara doorashooyinka soo socda.
Dagaal kadhacay buuralayda Galgala